Falanqeynta Kulanka AC Milan Vs Juventus, Rossoneri oo hogaanka lagala wareegi karo
HomeFalanqeynta KulamadaFalanqeynta Kulanka AC Milan Vs Juventus, Rossoneri oo hogaanka lagala wareegi karo
January 6, 2021 Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Italy, Wararka Maanta 0
Kulanka ugu adag Horyaalka Italy isbuucaan ayaa la ciyaaridoonaa marka kooxda Ac-Milan ay gurigeeda ku soo dhaweeyso kooxda Juventus oo sanadkan ku jirto kubad liidata marka loo eego Labo Milano oo isku heesta booska sare.
Ac-Milan ayaa lumin karta hadii kulankan guuldaro dhabarka loo saariyo ama xataa barbaro lagu qabto madama kooxda Inter Milan ay ka sareyso dhibic kaliya.
Wakhtiga: 22:45 habeenimo xilliga geeska Africa
Dhanka kale kooxda Juventus ayaa dooneysa in Kulankan ay guuleysato si ay iskaga xaadiro booska 3-aad oo Roma ay fadhiso hada.
Dhacdooyinka labada Kooxood laga diiwaangaliyay
Ka dib markii ay 4-2 ku badiyeen July 2020, AC Milan ayaa raadineysa guul is xig xiga oo ay ka gaarto Juventus kulan ka tirsan Serie A markii ugu horeysay tan iyo 2010, iyadoo uu hogaaminayo Leonardo.
AC Milan iyo Juventus ayaa ku kulmi doona Serie A-da Rossoneri ka hor Bianconeri oo miiska saaran markii ugu horreysay tan iyo bishii November 2015 – si kastaba ha ahaatee, Juventus ayaa kulankaas ku badisay 1-0,
Barbarihii ugu dambeeyay ee udhaxeeya Juventus iyo AC Milan wuxuu soo laabtay Febraayo 2012 (1-1, goolal ay kala dhaliyeen Nocerino iyo Matri) – tan iyo markaas seddex guul oo Rossoneri ah iyo 13 Bianconeri.
AC Milan ayaa dhalisay 2+ gool mid kasta oo ka mid ah 17-kii kulan ee ugu dambeysay oo ay ciyaartay Serie A, taariikhda 5-ta horyaal ee ugu sarreysa Yurub kaliya seddax koox ayaa muddo intaas ka badan qabtay: Bayern München (20 2014), Barcelona (18 2013) iyo 2006, iyo 19 1948) iyo Manchester United (22 1959).
AC Milan ayaa gool dhalisay mid kasta oo ka mid ah 17kii kulan ee ugu dambeysay oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka heerka koowaad, waana rikoor u yaal Rossoneri tan iyo 2010 – markii ugu dambeysay oo ay ku guuldareysato inay shabaqa soo taabato kulan ka tirsan Serie A ayaa timid sanad ka hor (0-0 v Sampdoria) 6da Janaayo).